कसको सहारा पाउने खै ? | कोरोना कहर | कोरोनाको बेला..
कसको सहारा पाउने खै ?
१० भाद्र २०७७, बुधबार १५:१०
म उदयपुरको त्रियुगा नगरपालिका ३ मोतीगडामा बस्छु । म गाईघाट बसेको धेरै वर्ष भयो । मेरो आफ्नो घर कहीँ पनि छैन विगत १२ वर्षदेखि नै भाडामा बस्दै आएको छु । भएको आफ्नो भागको सम्पत्ति पनि दाइले रक्सीमा सिद्ध्याइदियो । दाइकै नाममा जग्गा भएका कारण आफ्नो केही हक लागेन दाइले भाइप्रति कुनै दया राखेन । त्यसपछि त सुकुम्बासी जस्तै डेरामा बसेर दैनिक मजदुरीबाट जिन्दगी चलाउँछु । विगत ८ वर्षदेखि रिक्सा चलाउँदै आइरहेको छु । पहिले म सामान बोक्ने रिक्सा चलाउँथे, पछि मान्छे बोक्ने रिक्सा चलाउन थालें । यसरी नै आफ्नो आम्दानीबाट चार जना परिवार चलाइरहेको थिएँ ।
चैतमा कोरोनाले गर्दा लकडाउन भयो । लकडाउन भन्ने के हो सुनेको र जानेको पनि थिएन । पछि थाहा भयो लकडाउनमा बाहिर निस्कन र काम गर्न नमिल्ने रहेछ । लकडाउन भन्ने थाहा पाएपछि त जिन्दगी नै तहसनहस भए जस्तो लागेको थियो । कामै रोकिदिने भएपछि यो कोरोना म र मेरो परिवारका लागि शत्रु बनेर आएको महसुस भयो । हामी दैनिक ज्याला मजदुरलाई घरमा बस्नु भनेको भोक निम्त्याउनु हो ।
बाहिर काममा जान मनाही । काम पूरै ठप्प । घरमा भएका खाने कुराहरू केही दिनका लागि भन्दा पुग्ने थिएन । केही वर्ष यता मेरो कमाइ घट्दो क्रममा पनि थियो । पहिले रिक्सा चलाउँदा मेरो आम्दानी राम्रो नै हुन्थ्यो । तर जब यता बिजुलीबाट चल्ने रिक्सा र अटो आयो दैनिक आम्दानी खान लाउन ठिक्क हुने मात्र थियो । त्यसैले बचत पैसा थिएन । आफ्नो घर भएको भए पनि यतिको समस्या हुँदैन थियो कि ? छिमेकीहरूसँग पारिवारिक भएर जिउन सकिन्थ्यो होला । भाडाको बसाइ भएका हामी जस्तोको औंचो पैंचो गर्ने ठाउँ पनि नहुने रै छ ।
हाम्रोमा दुई पटक राहत बाँड्दा एक पटक १० केजी चामल र अर्को पटक १५ केजी चामल दिएको थियो । त्यसले कति नै समय पुग्थ्यो र ? लकडाउनमा कतै जान समेत नमिल्ने भएकोले अरू कुनै काम गर्न सक्ने र मिल्ने अवस्था पनि थिएन ।
हामीलाई खानाकै समस्या भयो । फाट्टफुट्ट खेतीपातीको कामहरू चलिरहेको थियो त्यसैले चिनजानको छिमेकीमा खन्ने जोत्ने कामका लागि कुरा गरें । उहाँहरूले खाएर दिनको ३-४ सय दिनुहुन्थ्यो तर त्यो काम पनि सधैं हुँदैन थियो । जसोतसो परिवार चलाइरहेको थिएँ ।
एक दिन काम गर्ने क्रममा कोदालोले आफ्नै खुट्टा काट्यो यसले झनै समस्या थप्यो । लकडाउनकै समस्याले भारी पुगेको बेला अर्को समस्या सुरु भयो । खनजोतबाटै भए पनि बाँचिरहेका थियौं । खुट्टा काटेपछि काममा जान सकिन । घरमा साना बालबच्चा भोको देखेपछि खुट्टा काटेर काम गर्न गार्हो हुँदा पनि धर पाइन । जसोतसो काममा फेरि फर्किएँ, सकी नसकी काम गर्दै थिएँ बिहान बेलुका खानलाई जुटाउँदै थिएँ ।
फेरि अर्को समस्या आइलाग्यो । असार १४ गते नुहाउने सिलसिलामा मेरी ४ वर्षीय छोरीको खुट्टामा पानी ट्यांकीमाथि रहेको इँटाले लागेर बूढीऔंला नै कुच्याइदियो । खुट्टामा गम्भीर चोट लागेपछि तत्काल जिल्ला हस्पिटल उदयपुर लगेँ । डाक्टरसापले राम्रोसँग हेरिदिनु भएन । उपचारमा लापरबाही गरिदिनुभयो त्यसैले घाउ झन् बिग्रियो । पछि यहाँ हुँदैन बाहिर अरूमा लैजानु भन्नुभयो । त्यसपछि छोरीलाई लाहानको पशुपति हस्पिटलमा लगें त्यहाँ डाक्डरले अप्रेसन नै गर्नुपर्ने उस्तै परे बूढीऔंला नै काट्नुपर्ने हुन सक्छ भनेका छन् । हामीसँग पैसा हुँदैन र थिएन पनि त्यसैले मैले त्यसको लागि कति जति खर्च लाग्ला भनेर सोधेँ । त्यसपछि उनीहरूले ५० हजार जति खर्च लाग्ने स्टिमेट निकालेका छन् । ५० हजार सुनेपछि त्यो बेला मलाई भाउन्न रिंगटा लागे जस्तो भो । यो सबै सपना जस्तो लाग्न थाल्यो । किनकि ५० हजार भनेको मेरो लागि ५० लाख बराबर थियो । खान लाउन त दैनिकी जोहो गर्दै हिँडिरहेको मैले त्यत्रो रकम कसरी ल्याउनु ।
तर पनि जसोतसो छोरीको भविष्यका लागि उपचार त गर्नु नै पर्यो । हारगुहार गर्न आफ्नो कोही छैनन् मलाई साहुले पनि पत्याउँदैन । अन्तिममा छोरीको उपचारका लागि मागेर सहयोग जुटाउने निर्णय गरें । माग्नु जानुभन्दा पहिले उदयपुरको एक मिडियामा (पूर्णपुष्टि मिडिया) आफ्नो कुरा राखेँ उहाँहरूले समाचार छापी दिनुभयो । त्यसपछि त्यो समाचार देखाउँदै नगरपालिकामा सहयोगको अनुरोध गरेँ नगरपालिकाले १ हजार सहयोग गर्यो र सहयोग गरिदिनेबारे एउटा सिफारिस पनि बनाइदियो । त्यो पैसा तत्काल उपचारमै पठाएँ । त्यही सिफारिस, समाचार र खुट्टाको घाउको फोटो देखाउँदै दैनिक माग्न सुरु गरें ।
माग्नलाई सजिलो थिएन । धेरैको भनाइ सुनें र सहें । माग्दा पनि डराएर माग्दै हिंड्छु १० रुपियाँ २० रुपियाँ ५० रुपियाँ पैसा जम्मा गर्दै हिंड्छु । म लाचार भएर माग्दै हिँडेको छु । म मात्रै हैन अरू पनि धेरैले मागेर उपचारहरू गराउँदै आएको सुन्छु । सहयोगका लागि अलि ठूलाठालु र हुनेखानेले माग्दा लाखौँ सहयोग उठ्ने रै छ, हामी जस्तोले माग्दा पैसाभन्दा पनि बढी भनाइ नै आउने रै छ ।
केही दैनिक काम गर्न पाए थोरैतिनै पैसा जम्मा गर्न सकिन्थ्यो होला । बरु नखाई पैसा जोगाएर भए पनि छोरीलाई उपचार गर्ने थिएँ । पहिले आफूले चलाउँदै गरेको रिक्सा पनि अहिले साहुले अर्कोलाई चलाउन दिएछन् । मलाई पनि थाहा छ मागेर खान हुँदैन भनेर तर यो समयमा के काम गरेर छोरीको उपचार गरौँ त ? समस्या भयो । कोरोनाले पीडामाथि झन् अर्को पीडा थपिएको छ । खै कसको सहारामा बाँच्ने ?
यो कथा गणेश वि.क.संग गरीएको कुराकानीमा रहेर बिक्रम राईले लेख्नु भएको हो ।
लकडाउनको बेला बहसका लागि रुकुम पुगें
२६ भाद्र २०७७, शुक्रबार १४:५७